Aqoonyahan Balwadeysan, W/Q: Cali Cabdi Coomay |
Aqoonyahan Balwadeysan, W/Q: Cali Cabdi Coomay
Surwaal qaybta hoose waxa googooyey kabaha, oo xaga hoose ka maray labada kabood ayuu ku lebisan yahay, oo miyuu surwaalka kor u qaad sowkan xaga
Muuqaal ahaan markaad ku eegto indho caafimaad qaba, waxa ay maskaxdaadu soo celinaysaa inuu magaalada nin waalan ka qoran yahay, balse waa aqoonyahan ilaahay ku manaystay hadal-yaqaanimo iyo bulsho dhexgal. Wuxuu xidhan yahay koofiyad noocan fooda hore dheer, badh ka mid ah timihiisa oo raamo ah ayaa dul saaran labada dhagood, wejigiisa waxa ka sookeeya hadh madow, oo way adagtahay inaad si dhamaystiran u aragto wejigiisa, madow aw-geed. Wuxuu soo saaray laba indhood oo aad moodo in lagu dhibqiyey isbiirtada cas. Shaadh isku darsaday uskag iyo jacdad ayuu si qaab daran u xidhan yahay.,yahay, oo miyuu surwaalka kor u qaad sowkan xaga hoose ka madhay isagoo cusub? Mooyi malaha isagaa inooga jawaabay. wuxuu noogu soo galay Hool aan ku haynay hawl aqooneed oo bulsho badan kulmiyey. Markuu ka soo galay albaabka ayuu markiiba lugta ku dhuftay koob madhan oo shaah laga cabbay oo kuraasta ag-yaalay, shanqadhii koobka iyo muuqiisa madow ayaanu hal mar wada eegnay. Halkii uu burburka koobka ka qaadi lahaa ayuu soo saaray ilko madoobaaday oo aad moodo dhuxul girgire saaran, markaasuu yidhi” kana maxaa na hordhigay.” Wuxuu fadhiistay meel aan naga fogayn.